Madaxwayne ku-xigeenka Somaliland, Ahna Ku-simaha Madaxwayanaha iyo Guddoomiyaha KULMIEY oo shicabka la tukaday | KULMIYE
Hargeysa 25/6/2017 (Warbaahinta Xisbiga KULMIYE)- Madaxwayneku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, ahna ku Simaha Madaxweynaha dalka Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa qaar ka mid ah dadwayanaha ku dhaqan magaalada Hargeysa kula soo tukaday salaadda ciidal-fidriga Masjid-jaamaca wayn ee magaalada caasimadda.
Madaxweyne-ku-xigeenka waxa madaxda ku wehelinaysay salaadda ka mid ahaa Guddoomiyaha KULMIYE, ahna murrashaxa Madaxweynaha xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi.
Md. Cabdiraxmaan Saylici oo khudbad u jeediyey shacabka waxa hambalyo uu u diray kadib uu ka hadlay heshiiskii dhawaan ay wadagaleen xukuumadda Somaliland iyo kooxda Khaatumo, waxaannu sheegay in dawladda uu hoggaaminayo Madaxweyne Siilaanyo ay dalka ku hoggaaminayso maslaxad iyo isu-soo-jiidista bulshada reer Somaliland.
“Aad baan idiinku hambalyaynayaa munaasibada Ciidul-fidriga awgeed, waxa kale oo aan jecelahay in aan ka hadlo heshiiska ay wada galeen xukuumadda Somaliland iyo Khaatumo, waxa jira dad mixnad ka dhex abuuraya heshiiskaa ama xageenan ha joogaan ama kuwii iyaga la joogay ha ahaadeene, waxaan aaminsanahay inay heshiiskaasi uu ahaa heshiis qaran,” ayuu yidhi Madaxweyne-ku-xigeenku.
Waxa kaloo Madaxweyne-ku-xigeenka iyo Guddoomiyaha KULMIYE ay ku qaabileen qaybo ka mid ah dadweynaha xarunta Madaxtooyada oo salaam ugu tagay.